नेपालीहरू निकै फेसनेबल छन् - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
नेपाली फेसन उद्योगमा परिचित नाम हो– तेन्जिङ छेतेन भुटिया । गान्तोक, सिक्किमका भुटियाले सन् २००५ मा बेंगलुरुस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ फेसन टेक्नोलोजीबाट ग्राजुएसन गरेका हुन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली फेसन डिजाइनिङमा सक्रिय भुटियाले नेपालका चर्चित सेलिब्रेटीहरूका लागि फेसन डिजाइन गरिसकेका छन् । सन् २०१२ मा चलचित्र भिसा गर्लमा काम पाएपछि भुटिया क्रिएसनमार्फत फेसन डिजाइनिङमा सक्रिय तेन्जिङ भारतको जुम टिभीबाट प्रसारित रियालिटी शो लेट्स डिजाइन सिजन–२ का फाइनलिस्टसमेत हुन् । भुटियासँग नेपाली फेसन उद्योग, नेपालीहरूको पहिरन शैली लगायत विविध विषयमा केन्द्रित साप्ताहिकका लागि जनक तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी :
नेपाली फेसन उद्योगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपाली फेसन उद्योगमा अहिले थुप्रै डिजाइनरहरू समर्पित हुनुहुन्छ । त्यसमा विदेशमा गएर नाम कमाएका डिजाइनरहरू पनि हुनुहन्छ । बेलायत, अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपाली फेसन डिजाइनरहरू अगाडि छन् । त्यसले नेपाली उद्योग र नेपाली बजारमा पनि राम्रो असर पारेको छ । सन् २००९–१० तिर मैले आफ्नो करिअर सुरु गर्दा अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन, डिजाइनरहरू पनि एकदमै कम थिए ।
नेपालमा फेसन संस्कृति पनि बढिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण के होला ?
इन्टरनेटका कारण अहिले जे कुरा पनि ग्लोबलाइज भएको छ । अहिले जे मा पनि सजिलै एक्सेस छ, जुन पहिले गाह्रो थियो । अहिले स्मार्टफोनको सहज उपलब्धताले एकै पटक सबै कुरामा पहुँच पुग्ने भएको छ । अहिले आफूलाई चाहेको कुरा खोज्न कम्प्युटर खोलिरहनुपर्ने बाध्यता पनि छैन, फोनमै सबै कुरा देखिन्छ । स्मार्टफोनले फेसन उद्योगलाई पनि स्मार्ट बनाएको छ । त्यसको प्रभाव फेसन उद्योगमा पर्नु स्वभाविक हो ।
नेपालीको किनमेल शैली कस्तो पाउनुभएको छ ?
विश्वव्यापीकरणसँगै किनमेल शैली पनि बदलिइरहेको छ । अहिले हामीले इन्टाग्राम, फेसबुकबाट आफ्ना डिजाइन बुष्ट गर्न पाइरहेका छौं । त्यसमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको राम्रो पहुँच छ । नेपाली फेसन डिजाइनरका डिजाइन नेपालमै आएर हेर्नुपर्ने बाध्यता छैन् । संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हाम्रा डिजाइन हेर्न सकिने भएको छ । इन्टरनेट तथा सामाजिक सन्जालहरूले सम्पर्कलाई पनि सहज बनाइदिएका छन् । नेपालीको किनमेलमा पनि त्यही हिसाबले परिवर्तन देखिएको छ ।
नेपाली फेसन डिजाइनहरूका धेरैजसो ग्राहक विदेशका नेपाली हुन् ?
काठमाडौंमा २० हजार रुपैयाँ तलब थापेर हाम्रो फेसन पछ्याएर साध्य हुँदैन । काठमाडौंलगायतका केही मुख्य सहरमा लाख रुपैयाँभन्दा माथि तलब थाप्नेहरूले डिजाइनर कहाँ गएर पहिरन बनाउने वा किन्ने सामथ्र्य राख्छन् । त्यो संख्या निकै थोरै छ । त्यसैले हाम्रा बढीजसो ग्राहक विदेशमा भएका नेपालीहरू नै हुन् ।
मूल्यका हिसाबले औसत कतिदेखि कतिसम्मका डिजाइन बेच्नुहुन्छ ?
म सस्तोमा १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम डेढ लाख रुपैयाँसम्मको पहिरन तयार गर्छु । हामी दुलहीका लागि ब्राइडल वेयर पनि बनाउँछौं, जुन केही महँगो हुन्छ । त्यसको झन्डै डेढ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । मेहनत धेरै पर्ने भएकाले हाम्रा कामदारले नै धेरै पैसा लान्छन् ।
नयाँ पुस्ताले पहिरनमा कसलाई पछ्याइरहेको देख्नुहुन्छ ?
नेपाली युवाहरूले विदेशी सेलिब्रेटीलाई एकदमै पछ्याउँछन् । जस्तो किम कार्दशियनको परिवार नै छ, केन्डल जेनर फेसनका रोलमोडल नै हुन् । त्यसबाहेक भारतीय अभिनेता/अभिनेत्रीहरूलाई पछ्याउँछन् । नेपालका सेलिब्रेटी, अभिनेता/अभिनेत्री तथा मिस नेपालहरूलाई पनि पछ्याइन्छ, उनीहरूजस्तै देखियोस् भन्ने इच्छा राखिन्छ । उनीहरूलाई धेरै पछ्याउनेहरू उनीहरूको पहिरन हेर्छन् । उनीहरूलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउन नसके पनि प्रयास भने गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालीहरू कस्तो पहिरन रुचाउँछन् ? नेपालका महिला तथा पुरुषले धेरै रोज्ने पहिरन कुन हो ?
पहिरनको छनौट कस्तो अवसरमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसमा भर पर्छ । नेपालीहरू विवाहको अवसरमा पश्चिमा शैलीको पहिरन लगाउँदैनन् । विवाहमा अधिकांशलाई चाहिने लेहेङगा र चोली नै हो । अझ धेरैजसोले लगाउने साडी नै हो । अन्य इभेन्ट तथा फेसन शोहरूमा वान पिस वा लङ गाउन लगाउँछन् । इभेन्ट तथा ठाउँ हेरेर पोसाक छनौट गरिन्छ । फाइभ स्टारमा इभेन्ट छ भने त्यहीअनुसार पहिरन लगाउँछन्, पार्टी प्यालेसमा हो भने त्यही अनुसार लगाइन्छ भने कार्यालय जाँदा त्यहीअनुसार लुगा लगाइन्छ । नेपाली महिलाहरू लेहेङ्गा, स्कर्ट, ब्लाउज, सलहरू एकदमै बढी किन्छन् । पुरुषहरू प्रिन्ट टिसर्ट, सेतो, कालो र नीलो स्ट्राइप सर्ट, नर्मल क्याजुअल पोसाक, क्याजुअल कोट तथा पाइन्ट बढी रुचाउँछन् । धेरैजसो युवाले वेस्टर्न आउफिट प्रयोग गर्छन् । युवतीहरूले स्कर्ट तथा वान पिस रोज्छन् ।
नेपालीहरू फेसनप्रति कति सचेत देखिन्छन् ?
एकदमै सचेत छन् । नेपालीजस्तो फेसनेबल दुनियाँमा प्राय: कमै ठाउँमा हुन्छन् । विदेशीलाई भन्दा नेपालीलाई लुगा लगाउनमा खास चासो र रहर छ । विदेशमा कसले के लगाइरहेको छ, नेपालमा कसले के लगाइरहेको छ, नेपालीहरूले खुब चासो लिन्छन् । नेपालीहरू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सस्ता, नक्कल गरिएका पहिरन किनेर भए पनि फेसनलाई पछ्याउँछन् ।
पहिरन छनौट गर्दा कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
पहिरन छनौट मानिसको रहरअनुसार हुन्छ । मानिसहरू आफूलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर विचार गर्दैनन् । सामान्यत: आफूलाई जुन रंगको पहिरन लगाउन मन छ, त्यही रंगको पहिरन किन्छन्, तर त्यसरी पहिरन छनौट गर्नु हुँदैन, पहिरन किन्दा पहिले त आफ्नो जिउ हेर्नुपर्छ । आफू कस्तो देखिन्छु ? मोटो छु कि दुब्लो छु ? मोटो हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर, मोटो मानिसलाई कस्तो पहिरन सुहाउँछ, ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मानिस होचो छ कि अग्लो छ, अग्लो छ भने उसलाई जुन पहिरन सुहाउँछ, होचो छ भने त्यो नसुहाउन सक्छ । हामीले डिजाइन गर्दा होचो मान्छेलाई कसरी अग्लो देखाउने, मोटो मान्छेलाई कसरी दुब्लो देखाउने, दुब्लो मान्छेलाई कसरी मोटो देखाउने त्यसमा ध्यान दिएर पहिरन तयार गर्छौं ।
शरीरको ढाँचाअनुसार पहिरन छनौट गर्न सकिन्छ ?
हिजोआज युवाहरू नीलो र सेतो स्ट्राइपका सर्ट लगाइरहेका छन्, त्यस्तो सर्ट लगाउँदा भर्टिकल स्ट्राइप लगाउने हो भने त्यसले मानिसलाई अग्लो देखाउँछ । होरिजेन्टल लाइन भएको पहिरनमा दुब्लो मानिस मोटो देखिन्छ । त्यसकारण पहिरन किन्दा त्यसमा प्रयोग भएका लाइनहरू, त्यसको रंग आदिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । प्राय: युवतीहरू पहिरन छान्दा भन्छन्— कालो लगायो भने दुब्लो देखिन्छ, सेतो लगायो भने मोटो देखिन्छ, त्यो रिफ्लेक्सन मात्र हो । हामीले यसमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ।
छालाको रंगअनुसार कसरी पहिरन छनौट गर्ने ?
गोरो मान्छेलाई रंगको छनौटमा खासै समस्या हुँदैन । गोरो मान्छेलाई जस्तो रंग भए पनि सुहाउँछ । हल्का गहुँगोरो वा गाढा गहुँगोरो मानिसले अलि गाढा रंगको पहिरन लगाउनुपर्छ । जस्तो नीलो रंग मन पर्छ भने हल्का नीलो प्रयोग नगर्ने, गाढा नीलो प्रयोग गर्ने । रातो मन पर्छ भने गाढा रातो प्रयोग गर्ने । नेपाल तथा भारतका मानिसले चर्को रंग प्रयोग गर्दा नराम्रो त देखिने होइन, तर त्यस्तो पहिरनमा कतिपय अवस्थामा आत्मविश्वास, हिँडाइ, शारीरिक बनावटजस्ता कुराले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सेलिब्रेटीहरू जे लगाए पनि आत्मविश्वासी देखिन्छन्, त्यसैले जे लगाए पनि वाउ भन्ने हुन्छ तर सर्वसाधारणमा त्यस्तो हुँदैन ।
नेपालमा कस्ता मानिसले फेसन डिजाइनर कहाँ पुगेर पहिरन तयार गराउँछन् ?
अपर क्लासकाहरू, बिजनेसम्यानहरू आउँछन् । बैकका उच्च अधिकारी, म्यानेजरहरू, होटल क्षेत्रमा काम गर्ने जो म्यानेजियल तहमा हुन्छन् उनीहरू, मार्केटिङ म्यानेजरहरू, व्यवसायीहरू तथा सेलिब्रेटीहरू आउँछन् । प्रायजसो आफूलाई स्मार्ट देखाउनुपर्नेहरू फेसन डिजाइनर कहाँ वा बुटिकमा पुगेर पहिरन किन्छन् ।
नेता तथा खेलाडीहरू कत्तिको आउँछन् ?
राजनीतिकर्मी तथा खेलाडीहरू फेसनतिर खासै जाँदैनन्, किनभने उनीहरूको झुकाव अर्कैतिर हुन्छ । खेलाडीहरू स्पोर्टवेयरतिरै आकर्षित हुन्छन् । नाइकीको एयर सुज आयो भने त्यो उनीहरूले लगाउनै पर्छ, तर उनीहरू फेसनतिर जाँदैनन् । नेताहरू पनि फेसनेबल देखिनुपर्ने हो तर नेता भन्नेबित्तिकै ठूलो विवाद हुन्छ, किनभने मानिसहरू भन्छन्— नेताहरूले पैसा खान्छन्, घूस खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरूले डिजाइनरले बनाएका आकर्षक पोसाक लगाउन थाले भने ए यसले त पक्कै खायो होला डिजाइनरको यस्तो महँगो डिजाइन लगाएर हिड्छ भनिन्छ । त्यसकारण नेताहरू सादा लुगा लगाएर आफूतिर कसैले औला नउठाउने वातावरण तयार गर्छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म कतिसम्म महँगो लुगा बिक्री भएको पाउनुभएको छ ?
नेपालमा त्यस्तो लाखौं–करोडौं पर्ने पहिरन बिक्री हुन्छ जस्तो लाग्दैन । विदेशमा भने करोडौंका पहिरन पनि तयार भैरहेका हुन्छन्, जुन नेपालीका लागि पत्याउनै गार्‍हो छ । एक पटक डियोरको एउटा लुगा, जसको डिजाइन जोन गालियानोले गरेका थिए, त्यसको मूल्य १ लाख ५० हजार डलर थियो । त्यो पैसामा त नेपालमा घरै किन्न सकिन्छ । नेपालमा त धेरैमा धेरै ४–५ लाख रुपैयाँसम्मको पहिरन बेचिन्छ होला, त्यो पनि दुलहीको ब्राइडल वेयर ।